Waxay ku Kordhinaysaa Tareenka Gawaarida ah ee Raaxada ah RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara22 EdirneDiyaarad Diyaaradeed Oo Lagu Dhawaaqo
29 / 10 / 2016 22 Edirne, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
Gawaarayaashu waxay doorbidayaan tareenka baabuurta sababta oo ah way fiican yihiin: Saamiyayaashu waxay doorbidayaan tareenka, kaas oo u duulaya Edirne iyo Magaalada Villach ee Austria, halkaasoo ay sidoo kale gawaaridooda ku rakibanaayeen markii ay yimaadeen iyo soo noqdeen.
Qaar ka mid ah qoysaska ku nool dalal kala duwan oo Yurub ah oo u yimaadda inay booqdaan ehelka waddankooda waxay doorbidayaan 'tareenka' gawaarida ', halkaas oo ay sidoo kale gawaaridooda ku ridaan saldhigyo ay ku kalsoon yihiin oo ka amaan badan yihiin ku wadista wadooyinka dheer.
Qaar ka mid ah dadka safarka ah ayaa doorbidaya tareenka ku safra inta udhaxeysa Edirne iyo magaalada Villach ee Austria, halkaasoo ay ku xareeyeen gawaaridooda markii ay yimaadeen oo ay ku noqdaan waddankoodii halkii ay gaari kaxeyn lahaayeen.
Tareenka Optima Express oo ka tagaya magaalada Edirne kuna sii jeedda magaalada Villach kun ee 450 kiiloomitir oo waddada loo taxaabay ee 30 ee tahriibayaasha ah, ayaa sheegaya inay leeyihiin safar raaxo leh. Ka dib markii uu booqday eheladiisa magaaladiisa Zonguldak, Ahmet Palabaş oo ah 61-sano jir ah kaasoo aaday Dortmund, Jarmalka, wuxuu sheegay inay doorbidaan wadada tareenka maxaa yeelay waa raaxo.
'15 WAA U SAMEEYAA SANO'
Kaniye Güngör oo sugaya bixitaanka tareenka inuu ku laabto Jarmalka ka dib markii uu fasaxa sanadlaha ah ku qaatay magaaladii uu ka dhashay ee Çanakkale, ayaa sheegay in ay ku safreen gaari tareenka ah muddo xNUMX sano ah. Isagoo sheegay inuu jecel yahay ku safridda tareenka, Güngör wuxuu yiri, “Sannad walba waxaan ku safraynaa dad fara badan oo wata tareenka. Waxaan door bidnaa tareenka otomaatiga ah sababta oo ah way fiican tahay. 15 had iyo jeer waa ay imaan jireen oo ay tegi jireen tareen. ”
MASHRUUCADA LAGU SAMEEYAY 7000 IYO 900 EURO
style cuntada iyagoo isku diyaarinaya jiilaalka soo socda ay ka khubarro hooyo ay u arkaan uploading baabuurta keenay qasacadaysan, ayaa sheegay in hab oo qaraar dib in ay dalkooda ay ku nool yihiin in Europe ka Turkey. Kuwa doonaya inay ku safraan tareenka baabuurta, waxaa la siiyaa fursad ay ugu raacaan gaari qaan gaar ah lacag dheeraad ah. Qiimayaashu waxay ka bilaabi karaan 700 Euro safarka wareega iyo ilaa 900 euro iyadoo kuxiran cabirka gaariga iyo gaariga weyn ee loo xusho.
Talooyin muhiim u Turkey Journey in qurba joogta ka Transfergo
Shan Wasiir ayaa doorbidaya Tareenka Xawaaraha Sare
Ra'iisul Wasaaraha iyo wasiirrada oo doorbidaya tareenka xawaaraha sare (Sawirka sawirka)
2 Million 75 Thousand People waxay doorbidaan tababarka Eid al Adha
Gawaarida telefishinka waxaa lagu rakibayaa munaasabadaha Hira iyo Sevr
Istanbul Metro waxay ka roon tahay madaarka Maraykanka
Ankara YHT Station ayaa maanta furan